ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Uighur (SesiCyrillic) Isi-Ukraine IsiBhunu IsiBislama IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKabyle IsiKannada IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLatvia IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMingrelia IsiNahuatl (SesiHuasteca) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiThai IsiTonga (SaseMalawi) IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiVezo IsiWallis IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu
NgoMgqibelo, ngo-October 5, 2013 abantu abangu-257 294 emazweni angu-21 bathamela umhlangano waminyaka yonke we-129 we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania besendaweni yomhlangano noma bewubukela kwezinye izindawo ngosizo lwe-Internet. Kamuva ngaleyo mpelasonto, abanye oFakazi baphinde bawubukela lo mhlangano owawusuqoshiwe. Sebebonke abathamela lo mhlangano babengu-1 413 676 emazweni angu-31. Umhlangano walo nyaka ube mkhulu kunayo yonke eyake yaba khona yoFakazi BakaJehova, waba mkhulu kunomhlangano okhethekile owawuseMexico naseMelika Ephakathi ngo-April 28, 2013 owawunabantu abangu-1 327 704.
Kusukela ngo-1920, oFakazi BakaJehova baye basakaza imihlangano yabo kwamanye amazwe besebenzisa ucingo kanye neziteshi zomsakazo ezinkulu. Manje, ubuchwepheshe be-Internet benza ngisho nezilaleli ezisezindaweni ezisemajukujukwini zikwazi ukuzwa nokubona okwenzekayo lapho kwenzeka noma ngokushesha ngemva kwalokho. UWilliam, ongomunye woFakazi BakaJehova e-United States, waya emhlanganweni owawuseRichmond, eVirginia, ngo-1942 futhi walalela isimiso somhlangano esasisakazwa ngocingo. Uma eqhathanisa lokho okwenzeka nalokho okwenzeke emhlanganweni waminyaka yonke, uthi: “Uzuza okuningi esimisweni uma ukwazi ukubona izikhulumi. Kuyazuzisa ngempela.”
Amalungu avela emahhovisi egatsha ahlukahlukene oFakazi BakaJehova asebenza isikhathi esingaphezu konyaka ehlela ukusakazwa kwesimiso nge-Internet, echitha isikhathi sawo esiningi kulo msebenzi. Ngempelasonto okwasakazwa ngayo, ochwepheshe babebheke isimiso beseBrooklyn, eNew York lapho umsebenzi wokusakaza wenziwa khona futhi besebenza ubusuku nemini njengoba isimiso sasisakazwa ezindaweni zomhlangano ngezikhathi ezingu-15 ezihlukahlukene. URyan owasiza ekuhlelweni nasekubhekeni isimiso esasisakazwa nge-Internet, uthi: “Asikwazanga nokulala, kodwa ukwazi ukuthi baningi kangakanani abantu ababezozuza esimisweni kwasenza sangazisola nakancane.”
Isimiso sithwetshulwa ngamakhamera e-video amaningana bese sithunyelwa emshinini wokuhlela kahle ama-video ukuze kukhethwe i-video engcono. Ngemva kwalokho, i-video eqoshiwe iya lapho kusakazwa khona ukuze kwenziwe ama-video ezinga eliphansi, elikahle nawezinga eliphezulu ngesikhathi isimiso siqhubeka.
I-video ibe isiya kuyi-computer iyihlukanise ibe izingxenyana ezidlala imizuzwana eyishumi ukuze ithunyelwe nge-Internet. Umshini othile ezindaweni zomhlangano udawuniloda lezo zingxenyana bese uyazihlanganisa ukuze zibe i-video eyodwa. Izilaleli zithola isimiso ngemva kwemizuzwana engu-30 noma engu-60.
Kwenzekani uma kuba nenkinga kuyi-Internet? Umshini osezindaweni zomhlangano ushintsha i-video ibe eyezinga eliphansi ukuze i-video yesimiso iqhubeke idlala bese ibuyela ezingeni eliphezulu uma i-network isilungile. Ngisho noma i-network ingahamba ngokuphelele, iziqeshana zama-video ebesezidawunilodiwe ziyoqhubeka zidlala. Uma i-network ingasheshe ibuye, izilaleli ngeke zibone nokuthi kuke kwaba nenkinga. Njengoba ukusakaza nge-Internet kuvame ukuba nezinkinga, kuba nezinhlelo ezicushwayo ukuze kuncishiswe izinkinga ezinkulu ezingase ziphakame.
Indawo okwakuqhutshelwa kuyo umhlangano: IHholo LoMhlangano LoFakazi BakaJehova LaseJersey City, eNew Jersey, e-U.S.A. Inani lababekhona: 4 732.
Indawo enkhulu kunazo zonke: EPerth, e-Australia. Inani lababekhona: 7 186.
ENyakatho ekude: EFairbanks, e-Alaska, e-U.S.A. Inani lababekhona: 255.
ENingizimu ekude: E-Invercargill, eNew Zealand. Inani lababekhona: 190.
Indawo ekude kunazo zonke EPerth, e-Australia, engaba amakhilomitha angu-18 700 uma usuka eJersey City.
Babukele isimiso eKatherine, iNdawo eseNyakatho, e-Australia